आज बुधबार तपाईको राशीफल : यात्रा, अध्ययन, पेसा व्यवसाय, लगानी र धनआर्जनको लागि कस्तो छ ?:: Artha Dabali
आज बुधबार तपाईको राशीफल : यात्रा, अध्ययन, पेसा व्यवसाय, लगानी र धनआर्जनको लागि कस्तो छ ?
आज वि.सं. २०७६ असार ४ गते बुधबार तदनुसार ई.सं. २०१९ जुन १९ तारिख । जेठ कृष्णपक्षको द्वितीया तिथी ।
परोपकारी काममा खट्नु पर्ने समय छ । दानपुण्यमा कमी हुने छैन । तीर्थ वा मन्दिर तथा पर्यटकीय स्थलको भ्रमण हुनसक्छ । गरेको काम सफल हुनेछ ।
सानो प्रयासले रोकिएको काम बन्नेछ । आम्दानीमा कमी हुने छैन । आर्थिक लाभ हुने काममा खट्नु पर्ने छ । धार्मिक ÷ सामाजिक क्षेत्रमा समय दिन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धा र तर्क विर्तकमा विजयी हुनेछ । प्रेम र प्रणयका लागि समय राम्रो छ । सानो प्रयासले भाग्यबल बढाउने योग छ । परिवारमा राम्रो छ । साथीभाइले सहयोग गर्नेछन । मेष राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग पहेलो र शुभ अंक ५रहेको छ ।
समय राम्रो छैन । कडा परिश्रम व्यर्थै खेर जान्छ । मन खिन्न हुनेछ । हाकिम वा विशिष्ट व्यक्तिसँग चित्त नबुझ्न सक्छ । बोलीमा संयमता अपनाउनुपर्छ किनभने बोलेको कुराले विपरित अर्थ लाग्न सक्छ ।
नयाँ साथीभाइको विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन । सामाजिक र परोपकारका काम समेत अवरोध हुनेछ । भाग्यबलमा कमी भएको महसुस हुनेछ । व्यापार व्यवसाय र रोजगारीमा लगनशीलताको साथ सक्रिय रहेमा मात्रै सफलता पाउन सकिन्छ । दाम्पत्य जीवन पनि निराशापूर्ण नै छ । दिउसोबाट भने क्रमशः निराशाको अन्त्य हुनसक्छ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग कालो शुभ अंक ८ रहेको छ ।
मन रोमान्टिक र भावुक बन्नेछ । समय मनोरञ्जनकेन्द्रीत छ । प्रेमको बन्धनमा बाँधिने बेला छ । उत्साहवद्र्धक समय छ । आम्दानीमा राम्रो छ । परिवारमा समेत सुखको अनुभूति हुनेछ ।
दिन ढल्दै जाँदा जिम्मेवारी बढ्दै जान्छ । रमाइलो त्यागे र व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न हुन मन लाग्नेछ । मिष्ठान्न भोजनको अवसर आउनेछ । आम्दानीका दृष्टिले नराम्रो छैन । तर विलासिताको क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्छ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रगं गुलाबी वा सिन्दुरे शुभ अंक २ रहेको छ ।
लामो समयदेखि रोकिएका काम बन्नेछन् । आकिस्म्कि निम्तो मान्न जानुपर्नेछ हुनसक्छ । भोजनको अवसर आउने सम्भावना छ तर खाने कुरामा सचेत हुनुहोला । शारीरिक प्रतिस्पर्धा, तर्क, विवाद वा न्याय सम्पादनका सिलसिलामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
मानसम्मान र प्रतिष्ठा बढ्ने योग छ । आजको विनियोजन र लगानीले उत्तरोत्तर फाइदा पुग्नेछ । घरायासी सुखसुविधा बढाउने कुनै महंगो वस्तुको किनमेल गर्न मन लाग्नेछ । यात्रा लाभादायी तर टाढा नजानुहोला । आर्थिक समस्या समाधान गर्ने उपाय पत्ता लाग्नेछ । शुभ रंग हलुका सेतो र शुभ अंक ६ रहेको छ ।
आत्मबल बढ्नेछ । शैक्षिक प्रगतिको समय छ । ज्ञान र चिन्तन उपयोगी बन्न सक्छ । मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मयर्दामा अभिवृद्धि हुनेछ । गुरुजन, अभिभावक र साथीभाइले उपयोगी र आवश्यक सहयोग गर्नेछन् ।
व्यापार व्यवासयबाट लाभ मिल्नेछ । माया प्रेमको वातावरण बन्नेछ । पारिवारिक वातावरण राम्रो छ । मन खुशी हुनेछ । ठूलाडाले सहयोग गर्नेछन् । सिंह राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग गाढा हरियो र शुभ अंक ५ रहेको छ ।
विवाद, तर्क र झगडामा नपरेको राम्रो हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य सुखको योग छ । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । थकानको महसुस भए पनि आनन्द र उल्लासको वातावरण बन्नेछ ।
आम्दानीको नयाँ बाटो देखा पर्नेछ । परेदेशमा बसी रोजगारी र व्यवासय गर्नेहरुले खानपिन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने सम्भावना छ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग रातो पहेलो र शुभ अंक ४ रहेको छ ।
पराक्रम र प्रसिद्धी बढाउने समय छ यसकारण सानातिना काममा समय खेर फाल्नु हुँदैन । भाइबहिनीले खुशी तुल्याउँनेछन् । सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने समय छ ।
दीर्घकालिक फाइदाको लागि गरिएको प्रयास सफल हुनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाउनेछ । आम्दानी बढ्नेछ । धार्मिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ । बोलीवचनमा कडापन त्याग्नु राम्रो हुनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग गाढा नीलो र शुभ अंक ३ रहेको छ ।
मिष्ठान्न भोजन मिल्नेछ । बोलीको प्रभावले काम बन्नेछ । कुटुम्बले सहयो गर्नेछन् । आर्थिक लगानी बढाउन समय राम्रो छ । सहयोगीहरुको भावना बुझ्दा दिन रमाइलो हुनेछ ।
नयाँ ठाउँमा धन लगनीको अवसर आउनेछ । कारोबारमा सुधार आउनेछ । सहयोगीहरुले काममा साथ दिनेछन् । विगतको श्रमबाट प्रशस्त लाभ लिने मौका छ । रोकिएको काम सम्पादन हुनेछन् । विशेष सभा समारोहमा सहभागी भइनेछ । प्रतियोतिामा विजयी भइनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग सेतो व ाउज्यालो र शुभ अंक ६ रहेको छ ।
तपाईको काममा आज अरु कसैले सहयोग गर्ने योग छैन । आत्म विश्वासमा कमी आउने छ । नियमित भोजनको समेत अनुकूलता छैन । घरमा पाहुना बढ्नसक्छन् । अरुले तपाईको कुरा काट्नेछने ।
मनमा उत्साह र डरको उदय भए पनि निराशाबोध हुनेछ । राती अबेरबाट मनपर्ने पर्ने वस्तु किनमेल गर्न सकिन्छ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग सिन्दुरे रातो र शुभ अंक ९ रहेको छ ।
काममा बाधा देखिए पनि नआत्तिनु होला । गोप्य योजना कार्यन्वयन त्यागेर काम गर्ने समय छ । व्यापार व्यवसायमा बेफाइदा छैन । परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नेछ । नयाँ कामको वातावरण तयार हुनेछ । अर्थलाभका अवसर आउने छ्रन । धेरै आशावादी नभई लगनशीलता र इमान्दारीताका साथमा काम गर्न सके उपलब्धि नै हासिल हुनेछ ।
आम्दानीको बाटोमा केहि असहजता देखिए पनि मेहनत गर्दा आर्थिक संकटको निवारण हुनेछ । समय र नियमको अनुशासन पालना गर्नुहोला । प्रतिस्पर्धी र शत्रु सत्रिय रहेका छन् त्यसैले काम गर्दा गोपनीयता अपनाउनुहोला । आँटेका काममा शुभचिन्तकले साथ दिनेछन् । नयाँ कामको वातावरण राम्रो छ । घर खर्चमा वृद्धि हुनेछ । साथीभाइको निम्तो आउन सक्छ । अर्थलाभको अवसर आउनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग सेतो वा वैजनी शुभ अंक ४ रहेको छ ।
पराक्रम र प्रसिद्धीमा वृद्धि हुनेछ । मेहनत गर्दा जे काममा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ । देवालय मठमन्दिर आदिको भ्रमण हुनेछ । इष्टमित्रको सहयोगले काम बन्न सक्छ ।
नोकरी गर्नेले मानसम्मान पाउनेछन् । अध्ययनमा लाभ छ । विश्वासको वातावरण बन्नेछ । रोकिएका काम बन्नेछ । निर्णय क्षमता र आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ । अध्यनयमा प्रगति हुनेछ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग कालो र शुभ अंक ३ रहेको छ ।
अभिवाकको स्वास्थ्यले चिन्तित तुल्याउने देखिन्छ । साना तिना काममा अल्भेर समय वित्नेछ । परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा मन नलाग्दा समस्या आउनेछ । सचेत हुनुहोला । झगडाबाट टाढा हुनेछ ।
चिन्तमूलक काममा सफसलता मिल्नेछ । प्रेम र प्रणयमा भने यस्तो देखिदैन । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग नीलो र शुभ अंक ६ रहेको छ । व्यवासय वा नोकरीमा संलग्न हुनेहरुले राम्रो कमाउन सक्ने योग छैन । प्रेम र प्रणयमा सफल हुने देखिदैन । शुभ रंग ध्वाँसे र शुभ अंक ६ रहेको छ ।